DHEGEYSO: Culimada Sweden oo si kulul uga fal-celisey imaamyo la musaafurinayo | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: Culimada Sweden oo si kulul uga fal-celisey imaamyo la musaafurinayo
DHEGEYSO: Culimada Sweden oo si kulul uga fal-celisey imaamyo la musaafurinayo
(Stockholm) 11 Luulyo 2019 – Laba qofood oo kale oo ka mid 6 qofood oo ay soo qabatay hay’adda Nabad Sugidda Sweden ee Säkerhetspolisen ama Säpo ayaa horay loo sheegay in Sweden laga musaafuriyo, kaddib markii ay sidaa go’aamisey Waaxda Socdaalka Sweden ee Migrationsverket.
Imaamyadan la musaafurinayo oo aan magacyadooda la sheegin ayaa kala ah imaam uu fadhigiisu yahay gobollada dhexe ee Sweden, iyo nin kale oo xiriir dhow la leh masjidka magaalada Gävle.
Haddaba, Idaacadda Sweden laanteeda af Kurdishka ayaa waraysatay Imaam la yiraahdo Ra’uud Axmadii oo sidoo kale ah gayfane u dooda xuquuqda dadka Muslimiinta ah kana tirsan Jamciyad Islaami ah, waxaana la waydiiyay sida uu u arko saamaynta go’aankani. – Aragtidaydu waxay tahay inuu go’aankani si xun wax u saameeyn doono.’’ Ayuu yiri Imaamku.
Musaafurinta Imaamyadan ayaa waxaa horay mid aan dastuurka waafaqsanayn ugu tilmaantay Jamciyad ay leeyihiin qarreennada Sweden oo la yiraahdo Sveriges Advokatsamfund, waxaana Imaamka la waydiiyay cawaaqibka ka dhalan kara musaafurintooda.
– Waa in dadkan loola dhaqmaa si aadminimo leh haddii ay dad diimeed yihiin iyo haddii kaleba, soow ma ogid in noloshoodu ay halis ku jirto haddii dalkooda loo celiyo, sidaa darteed, waa in lagu ciqaabaa Sweden, waayo laga yaabee in dalkooda lagu toogto,’’ ayuu raaciyay.
Hay’adda Nabad Sugidda Säpo ayaan soo bandhigin caddaymo waadax ah, balse war saxaafadeed ay soo saartay ayay ku sheegtay in ashkhaasta ay ku dheggan tahay lagu haysto inay asaasi u ahaayeen howlo xag-jirayn ahaa oo abuuri lahaa bay’o ay ku bullaali karto xag-jirnimo marka dambe gacan ka hadal dhalin karta.
Imaam kale oo la yiraahdo Muxsin Asingar ayaa aad u saluugey cadaaladda ay wadaadadani heleen, isagoo sheegay inaan Waaxda Nabad Sugiddu wax caddayn ah keenin ilaa iminka.
– Waa in la caddeeyaa kiiska ma aha uun in la iska yiraahdo sidaa ayay sameeyeen, hadda waxaan taa sugaynaa 6 bilood, haatanna sanad ka badan ayay weli xabsiga dhex fadhiyaan,’’ ayuu yiri Imaam Muxsin.
Dadkan la xirey ayaa loo cuskaday xeerka la socodka dadka laga shakiyo ee soo galootiga ah, kaasoo Nabad Sugidda Säpo siinaya xuquuq idman oo ay ku codsan karto in Sweden laga cayriyo dadka ay u calaamayso inay halis ku yihiin amaanka qaranka Sweden.
Previous article”DIB U BAXA!” – Maraakiibta dagaalka Iiraan & UK oo ku sigtay inay is xabadeeyaan + Sawirro
Next articleDAAWO: Weriye Maraykan ah oo Ilhaan Cumar ula hadlaya sidii inuu isagu soo korsaday!!